Fiarahana talenta maroloko :: Hizara ny voka-pikarohana ara-mozika nataony ny tarika Gasy 4 • AoRaha
Fiarahana talenta maroloko Hizara ny voka-pikarohana ara-mozika nataony ny tarika Gasy 4
Talenta tafaray. Tarika iray ivondronana mpitendry efatra kalazalahy nandia vanim-potoana samy hafa ny Gasy 4, izay ahitana an’i Rôla Gamana (mpitendry gitara), Tiana Rainitelo (mpidoboka amponga lava sy korintsana), Manitsindava (mpitendry valiha marovany) ary i Dô Be (mpanao feon-kira am-bava). Hanolotra ny voka-pikarohana ara-mozika, izay noketrehina nandritra ny roa volana etsy amin’ny Alliance française Andavamamba (AFT) ireto mpanakanto ireto amin’ny 31 mey ho avy izao.
“Nipoitra avy amin’ny tontolo samihafa izahay sady ahitana mpanakanto zokiny sy zandriny. Tendro iraisana ny fanomezan-kasina ny mozika malagasy amin’ny endriny rehetra. Miisa telo ambin’ny folo kosa ny sanganasa voaforonay izay taratry ny tantaran’ny mozika malagasy avokoa”, hoy ny fanazavan’i Rôla Gamana.
Teraka avy tamin’ny tetikasa “Mamelomaso”, tsirin-kevitr’i Rôla Gamana, ny Gasy 4. Tsy nitsahatra nanao fizarana traikefa izy efatra mirahalahy, nanomboka ny volana febroary lasa teo. Tanjona ny hametraka fomba fijery vaovao amin’ny kanto malagasy.
Andron’ny Mozea :: Haroso ny lanonana fankalazana ho an’Antananarivo
Hetsika an-kalamanjana :: Mitohy ny fanolorana ny “Street Gospel”